Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Waare oo Mooshin xil ka qaadis ah laga gudbiyey (Akhriso) - Wadani.com: All Somali News. Views and Analysis
Home/Somali News/Madaxweynaha Hirshabeelle Mudane Waare oo Mooshin xil ka qaadis ah laga gudbiyey (Akhriso)
Wararka laga helayo magaalada Jowhar ee xarunta maamulka Hirshabeelle ayaa sheegaya Mooshin kalsooni kala noqosho madaxweynaha Hirshabeelle loo gudbiyey Madaxweynaha maamulka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare.
Mooshinkan ayaa la sheegay inay saxiixeen in ku dhow 50 xildhibaan oo ka tirsan Baarlamaanka Hirshabeelle, iyadoodoo ay si rasmi ah u qabteen Guddoonka Baarlamaanka maamulka oo wadajira, sida ay sheegayaan wararka caawa laga helayo magaaada Jowhar.
Xildhibannada ayaa madaxweyne Waare ku eedeynaya xil gudasho la’aan iyo qodobo dhowr ah, waxaana mooshinka ka guddoomay guddoomiyaha Guddoomiyaha Baarlamaanka Hirshabeelle Sheekh Cismaan Barre Maxamed oo ay dhinac fadhiyeen labadiisa ku xigeen.
Arrintan ayaa imaaneysa iyadoo dhowaan magaalada Muqdisho heshiis lagu gaaray oo madaxda Hirshabelle iyo xukuumadda Soomaaliya ay shaaciyeen in xal laga gaaray khilaafkii u dhaxeeyay dowladda Soomaaliya iyo madaxweyne Waare.
XOG CULUS: Xildhibaan Xasan Sheekh oo Qorshe halis ah u abaabulay Xukuumadda, dalkana ka dhoofay [Akhriso]